राजदुत प्रकरणले झुकाएको नेपाली शीर - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
-- गोपाल छन्त्याल/नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : बुधबार, पुस २५, २०७५
अष्ट्रेलियाको समृद्धि जति लोभलाग्दो छ, त्यति नै नेपाली समुदायको योगदानको ‘ग्राफ’ बढ्दो छ, यो माटोमा । ‘खास लक्ष्य’ प्राप्तिमा सबेरै देखि रातभर परिश्रमी नेपाली हातहरु एकै रफ्तारमा दौडिरहेको हुन्छ । एउटा निश्चित विन्दुमा पुग्दा व्यक्तिगत रुपमा त्यो ‘खास लक्ष्य’ पूरा हुन्छ या हुदैन् तर, अनवरत खियाइने औलाहरुले अष्टे«लियाको उन्नतिमा भने जरुर योगदान पुगीरहेको छ । देशका रुपमा नेपाल र अष्टे«लिया बीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६ दशक पुरा हुदैछ । देशको कुटनीति, नागरिकको हकहित र नेपाल प्रति अष्टे«लियन समुदायको चासो र सहभागिता बढाउन सेतुका रुपमा काम गर्ने जिम्मा पाएका राजदुत लक्की शेर्पा आफै ‘मानव तस्करी’ जस्तो जघन्य अपराध प्रकरणमा मुछिएकी छन् ।
यसले, परिश्रम, इमान्दारिता र लगनशीलताको नेपाली पहिचान माथि कालो दाग लागेको छ । राजदुत शेर्पा माथि उनकै चालक वाङछु शेर्पाले लगाएको आरोप, त्यसपछि राजदुतावासको प्रतिकात्मक प्रेस–विज्ञप्ति, परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित स्पष्टीकरण माग र राजदुतको मौखिक बयान जस्ता घटनाले को सहि र गलत ? तथ्यहरु खुल्दै जानेछन् । तर, प्रवासमा नेपाली आत्मसम्मानको रक्षार्थ खटिने अधिकारिक निकायको नेतृत्व तहबाट हुने नाजायक कर्मले सिँगो देश र नागरिकको शीर झुकाउने काम भएको छ ।
चालक वाङछुको आरोप
वाङछु शेर्पा सन् २०१७ को जून ९ तारेख राजदुत शेर्पाकी अर्दलीका रुपमा अष्ट्रेलिया आएका हुन् । सवारी सञ्चालनमा पोख्त उनले करिब ४ महिना सवारी चालक र भान्छेका रुपमा दुतावासमै काम गरे । हालै उनले नेपालको एक टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत राजदुत लक्की र उनकी श्रीमान सोनामले आफुसँग ३३ लाख रुपैयाँ असुली गरेर अष्टे«लिया लिएको र अन्य व्यक्तिहरुलाई अष्टे«लिया ल्याउन आफु र आफ्नो श्रीमति परिचालन गरेको आरोप लगाएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । बाङछुको श्रीमति नेपालमा अष्टे«लिया पठाईदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा जेल परेकी छन् । यसैबारे वाङछुले एक टेलिभिजन अन्र्तवार्तामा भनेका छन् –‘मेरी श्रीमती अहिले काठमाडौंको सेन्ट्रल जेलमा छिन् । हप्तामा एकचोटि उनले मलाई फोन गर्छिन् । बैदेशिक रोजगारीको कागज गर्न लगाएर उनलाई त्यहाँसम्म पु¥याइएको छ । जेलभित्रको माहोल ठीक छैन । तीन हप्ताजति भो, श्रीमतीले मलाई फोनमा आत्महत्या गर्छु भनिन् ।
मैले लिएको पैसा फिर्ता गर्छु भनेर सही गरेपछि मेरी श्रीमती जेल परेकी हुन् । यसरी परिचालन गर्ने उनै लक्की परिवार हुन् ।’ वाङछुले यस्तो सार्वजनिक आरोप लगाएको केहि दिनपछि क्यानवेरास्थित नेपाली दुतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राजदुत माथिको आरोप निराधार भएको दाबी ग¥यो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आङ्छु शेर्पाले अस्ट्रेलियामा लुकीछिपी बसेर सम्मानित अदालतलाई प्रभावित पार्न र व्यक्तिगत छवि धमिल्याउने उद्देश्यले अत्यन्त भ्रामक, मनगढन्ते, कपोकल्पित रूपमा लगाइएको आरोप मिथ्या, तथ्यहीन र आधारहीन छ । निजले लगाएको झूठा आरोपको सम्बन्धमा विश्वास नगर्न, कुनै पनि भ्रममा नपर्न र सत्यतथ्य अविलम्ब आउने हुनाले त्यतिन्जेलसम्म धैर्य राख्न हुन समेत यसै विज्ञप्तिमार्फत सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन सहसचिवको टोली बनाएर राजदुत शेर्पा माथि छानविन अघि बढाएको छ । प्रशासन महाशाखा प्रमुख मणि भट्टराईको नेतृत्वमा अस्ट्रेलिया समेत हेर्ने महाशाखा प्रमुख तापास अधिकारी र शिष्टचारमाहापाल दीपक अधिकारी सम्मिलित टोलीले मन्त्रालय र उनका साथीहरूसँगको सम्पर्क लगायतका विषयमा छानबिन गरिरहेका छन्। छानविन सुरु गरेको लामो समयसम्म पनि टोलीले को सही भन्ने विषय टुँगो लगाउन सकेको छैन । यसले भित्री रुपमा लेनदेन मार्फत मुद्दा साम्य पार्ने रणनीति त हुदै छैन ? भन्ने शंसय उत्पन्न भइरहेको छ ।
छानविन टोली समक्ष बयान दिन काठमाडौँ पुगेकी राजदुत लक्कीको राजनीतिक भेटघाट पनि बाक्लिदै गएको छ । आरोप सार्वजनिक भोलीपल्टै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यसबारे गहन तरिकाले अनुसन्धान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सोही बमोजिम तत्कालै छानविन समिति पनि बनेकै हो । तर, त्यसयता करिब महिना दिन सम्म पनि यथार्थ सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
राजदुत शेर्पाको जन्मभूमि संखुवासभा हो । ४३ वर्षीया लक्कीले त्रिविबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । अध्ययनमा तेज उनी अष्टे«लियासँगै विभिन्न मुलुकमा पुगेर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी हासिल गर्ने अवसर पाइन् । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा कामको अनुभब हासिल गरेकी शेर्पाले अन्तराष्ट्रिय महिला नेतृ अवार्डहरु पनि थापेकी छन् । आदीबासी जनजाति महासंघको सचिब समेत बनेकी उनी ४ बर्ष संविधानसभाको सदस्य समेत भइन् । उनी एमालेबाट संविधानसभा सदस्य चुनिए पनि राजदुतको नियुक्ति भने माओबादी प्रवेश गरेर त्यही कोटाबाट भएकी हुन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोडबलमै उनी राजदुत बनेकी हुन् । उनको नियुक्तिलाई लिएर तत्कालिन माओबादीभित्र निकै विबाद भएको थियो । सवारी चालक वाङ्छु शेर्पाका अनुसार, लक्कीसँगै यो प्रकरणमा उनका श्रीमान सोनामको बढी सक्रियता छ । लक्की श्रीमानले आफुलाई अमेरिका पठाईदिन्छु भन्दै सुरुमा रकम माग गरेको समेत उनले जनाएका छन् । ‘अमेरिका भिषा नलागेपछि मेरी श्रीमति राजदुत बन्दैछिन्, सोही मार्फत मिलाउँछु भनेको थियो’, बाङछुले भनेका छन् । सोनाम केहि समय अमेरिका बसेर नेपाल फर्केका हुन् ।
प्रवासमा देशको अधिकारिक प्रतिनिधी मानिने राजदुतले विवादास्पद कर्म गर्ने श्रृङखला लक्की प्रकरण मात्र पहिलो घटना होइन् । विदेशी भूमिमा समस्यामा परेकालाई उद्दार र राहत दिनुको सट्टा उल्टै तिनै नागरिकको श्रमको शोषण गर्नेसम्मका घटना विगतमा भएका थिए । सन् २०११ मा साउदी अरेबियाका राजदुत हमिद अन्सारी मृतक नेपाली कामदारको क्षतिपूर्ति रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा बर्खास्तीमा परेकी थिइन् । सडक दुघटनामा ज्यान गुमाएका झापाका रमेश सुवेदीलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप कम्पनीले परिवारजनलाई उपलब्ध गराएको रकम राजदुत आफै झ्वाम पारेकी थिइन् । सन् १०८८ मै अमेरिकाका लागि तत्कालिन राजदुत विश्व प्रधान पुस्तक चोरीको अभियोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो । सन् २०१३ मा कतारका लागि राजदुत मायाँ कुमारी शर्माले कतारलाई कुटनीति मर्यादा विपरित खुल्ला जेलको सँज्ञा दिएपछि कतार सरकारको दबाबमा उनलाई फिर्ता बोलाईएको थियो । प्रवासमा जे–जस्तो अभियोग लागेपनि विगतको नजिरले यस्ता आरोपित राजदुतहरु बर्खास्तीमा परेका छन् ।
राजदुतको गरिमा र स्वाभीमान
राजदुत नियुक्तिलाई खेलाँचीको विषय बनाईदिदां प्रवासमा नेपाली स्वाभीमानको धज्जी उडेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । राजदुत माथि यस्ता गम्भिर खालको आरोप लाग्दा सम्बन्धित देशले त्यहाँका नागरिक र देश प्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? नियुक्ति दिने तहमा बस्नेहरुले यसप्रति कहिल्यै ध्यान दिएनन् । देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदुत हुनलाई कस्तो किसिमको योग्यता ? कुन तहको कुटनीतिक मर्यादा र आचरण हुनुपर्छ ? भन्ने जस्ता विषयको नजरअन्दाज बिनै राजनीतिक आस्थाका आधारमा अझ भित्री लेनदेनलाई मूख्य विषय बनाइँदा यस्ता समस्या आउने गरेका हुन् । पैशासँग पद साट्ने परिपाटीकै कारण ठाउँ–ठाउँका राजदुतहरु विवादमा तानिएका छन् ।
राजदुत नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाई गरिन्छ, तर त्यो यति कर्मकाण्डी हुन्छ, त्यसपूर्व नै उच्च तहमा सम्पूर्ण सहमति भइसकेको हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाईलाई त देखाउने दाँत मात्र बनाईएको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले राजदुत पदलाई आफ्नो खल्टीको पद मान्दा जनताको माथिल्लो निकाय पनि निकम्मा हुदोरहेछ भन्ने उदाहरण यहि सुनुवाईलाई हेर्दा फरक पर्दैन । राजदुत नियुक्ति पैशाको चलखेल कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा एकपटक तत्कालिन फोरम लोकतान्त्रिकको सिफारिशमा ओमनका राजदुतमा नियुक्ति भएकी शर्मिला पराजुली ढकाल प्रकरणलाई हेर्दा हुन्छ । ढकालकै कारण विजय गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक फुटको संघारमा पुगेको थियो । ढकालले अध्यक्ष गच्छेदारलाई ठुलो रकम रकम दिएको तत्कालीन समयमा फोरमकै नेताहरुले सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए । राजदुत नियुक्तिलाई लेनदेनको व्यवस्था बनाउन नेताहरुले संविधानमै कुनै त्यस्तो खाश व्यवस्था गरेका छैनन्, जसले उनीहरुलाई भन्ने ठाउँ दिएको छ । संविधानको धारा २८२ मा राजदुत नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार, ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदुत वा कुनै खास प्रायोजनका लागि विशेष प्रतिनिधी नियुक्ति गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधान मै राजदुतको योग्यता र आचरण स्पष्ट पारिनुपर्ने परराष्ट्रविद्हरुको भनाईमा दम छ । कुटनीतिक ज्ञान र सीप, सामाजिक रुपमा सर्वस्वीकार्य, सम्बन्धित देशको कानुन, नेपाली समुदायको समस्याबारे जानकार व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सकियो भने त्यसले सहि परिणाम दिन्छ नत्र राजदुतको गरिमा यसरी नै लिलामी हुदै जानेछ । देशको स्वाभीमान नाश हुदै जानेछ ।
–प्रतिक्रियाका लागिः journal.myagdi007@gmail.com (यो लेख दि नेपाली टाइम्स अष्टे«लियाको जनवरी अंकमा प्रकाशित छ । )